Lacag loo uruuriyay canug dhib lagu hayay soo duubay oo gaartay $300,000 - BBC News Somali
Xigashada Sawirka, YARRAKA BAYLES
Muuqaalka Quaden oo oynaya ayaa waxaa onlineka laga daawaday malaayiin jeer
Qiyaastii A$452,000 ($300,000; £230,000) ayaa loo uruuriyay wiilkan sagaal sanno jirka ah ee u dhashay waddanka Australia, taas oo qeyb ka aheyd olole la doonayay in wiilkaasi lagu geeyo Disneyland kaddib markii muuqaal uu walaaciisa ku muujinayo dunida qabsaday.
Yarraka Bayles ayaa waxa ay baraha bulshada soo dhigtay muuqaal ay ka duubtay wiilkeeda, Quaden, oo oynaya kaddib markii lagu bartilmaameedsaday iskuulka gaabnidiisa awadeed.
"Taasi waxa ay xoogsheegashadu horseeddo," ayey muuqaalka ku tiri, kaas oo wiilkeeda uu ku leeyahay waxaan doonayaa inaan isdilo.
Haatan bogga dhaqaalaha lagu uruuriyo ee GoFundMe ayaa waxaa lagu uruuriyay 30 jibaar in ka badan lacagtii bartilmaameedku ahaa ee gaaraysay $10,000.
Ragga gaagaaban ma dhib ayey kala kulmaan iney lammaane helaan?
Boggaas ayaa waxaa furay majaajilaystaha reer Mareykan, Brad Williams, kaddib markii uu aad u shaacbaxay muuqaalka si uu lacag ugu uruuriyo Quaden si loo geeyo Disneyland.
Laacibiinta xulka qaranka ee Rugby-da ee Australia ayaa sidoo kale Quaden waxa ay ku casuumeen inuu calanka u qaado ciyaarta ay maanta oo Sabti ah kaga hortagayaan Maori All Stars.
Dad caan ah oo ay ka mid yihiin jilaaga Hugh Jackman iyo laacibka kubadda kolayga Enes Kanter ayaa sidoo kale arrinta ka hadlay, halka waalidiin dalal kale ku sugan ay carruurtooda ka soo duubeen muuqaallo ay ku muujinayaan sida ay arrinta uga xun yihiin.
Jackman ayaa waxa uu Quaden u sheegay "intaad og tahay waad ka awood badan tahay, saaxiib" qofkasatana waxa uu ugu baaqay inuu "naxariis yeesho".
Iyadoo ka hadlaysay shir jaraa'id, ayey Ms Bayles waxa ay sheegtay in ay rajaynayso in waxa ku dhacay wiilkeeda ay sare u qadi doonto wacyigelinta ku aaddan saameyn ay xoogsheegashadu leedahay.
"Dad badan ayaa waxa ay nooga baxaan xoogsheegasho ama cadaadis, sababtoo ah faquuq iyo midabtakoor. Waxyaabo badan oo xoogsheegasho ah ayaa jira," ayey tiri.
"Waa waxa ugu xun in waalid uu carruurtiisii waayo taasna waa arrin aan maalinwalba wajaho," ayey tiri, iadoo intaas ku dartay in iskudayga dilka "ay dhab tahay".
"Waxaa intaas dheer, in wiilkeyga uu gaaban yahay oo lixaadkiisu uu kala dhiman yahay dadku ma fahmaan in taasi ay tahay laba arrimood oo culus. Midabtakoorka iyo faquuqana waxa ay ku yimaadaan lixaadkiisa kala dhiman."
Maxaa ku jira muuqaalka Quaden?
Muuqaalkaas oo ka koobnaa lix daqiiqadood ayaa waxaa baraha bulshada Talaadadii soo galisay Quaden hooyadii taas oo tilmaamaysay xoogsheegasho arxandarra ah oo maalinkasta lagu hayay wiilkeeda. Qoyska oo ah dadka gaagaaban ee Australia ayaa waxa ay ku nool yihiin Queensland.
"Wiilkeyga ayaa waxaan ka soo qaaday iskuulka, oo waxaan indhahayga ku arkay isagoo la cadaadinaayo, waxaan wacay maamulihii, waxaanan doonayaa inay dadku ogaadaan - waalidiinta, dadka waxbartay, macallimiinta - in taasi ay tahay saameynta ka dhalatay cadaadiska iyo xoogsheegashada," Ms Bayle ayaa tiri xilli wiilkeeda ay ilmadu ka qubmaysay.
"Maalinkasta waxbaa ku dhaca. Xaalad kale, cadaadis kale, cay kale iyo magac u yeeris kale.
"Fadlan carruurtiinna, qoysaskiina, iyo saaxiibadiin wax ma bari kartaan?"
Xigashada Sawirka, Gillian Martin
Gillian Martin, oo la sawiran gabadheeda 20-jirka ah ee Quinn, ayaa sheegtay in bulshadu ay dadka gaagaaban wax kale u arkaan
Becky Curran Kekula, oo ah haweeney dadka dhiirigelisa oo saldhigeedu yahay waddanka Mareykanka, oo la nool dad gaagaaban ayaa waxa ay rumaysan tahay in mid ka mid ah waxyaabaha ugu dambeeya ee ay tahay in dadku ay ka fakaraan ay tahay inay tahay wax la aqbali karo in dadka gaagaaban lagu qoslo oo la sii milicsado.
"Dadku inta ay nool yihiin maalinwalba qof gaaban ma arkaan, marka waxaa cad in warbaahintu ay qeyb ka qaadan karto sida bulshadu ay dadkaas ula dhaqanto."
Warwick Davis ayaa muuqaalka ugu yeeray "mid aad looga walaaco"
Jilaa Warwick Davis, oo wax ka aasaasay hay'adda Dadka Gaagaaban ee UK, ayaa sheegay in muuqaalka Quaden uu ahaa "mid aanan la daawan karayn".
"Dhab ahaantii waa wax aad looga xumaado in arrimo noocaas oo kale ay weli maatna dunida ka dhacayaan. Waxaannu jeclaan lahayn inaannu bal u fakarno sida innagoo wax xanaanaynayna, oo khalqiga jecel, oo dhab ahaantii aannu wadnaheenna dareensiinoo, mararka qaar maba dhacaysee.
"Waxaan fliayaa in waalidiintu ay dowr ka ciyaari karaan arrimaha noocan oo kale ah. Waxbaristu gurigey ka bilaabataa oo waalidiinta ayey tahay inay qaadaan mas'uuliyadda carruurtooda iyo hab dhaqankooda dunida guudkeedaba," ayuu yiri.